Wasiirkii Arrimaha dibadda DF Cawad oo xilkii laga qaaday | KEYDMEDIA ONLINE
Wasiirkii Arrimaha dibadda DF Cawad oo xilkii laga qaaday
Wasiirkii arrimaha dibadda Dowladda Federaalka Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa xilkii laga qaaday, iyadoo loo magacaabay xilkaasi wasiir cusub
MUQDISHO, Soomaaliya - Wasiirkii Wasaaradda arrimaha dibadda Dowladda Federaalka Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa xilkii laga qaaday, waxaana xilkaasi loo magacaabay Maxamed Cabdirisaaq Maxamuud.
Axmed Ciise Cawad oo kamida ahaa saaxiibada ku dhaw-dhaw Madaxweyne Farmaajo, horayna uga soo gudbay isku shaandheyntii u dambeysay ee Ra'iisulwasaaraha cusub ee Maxamed Xuseen Rooble uu ku sameeyay Golaha wasiirada kaddib markii xafiiska laga eryay Xasan Cali Khayre.
Saacado kahor ayey ahayd markii uu daabacay war qoraal ah oo ku saabsanaa mowqifka Dowladda Soomaaliya ee ku aadan xaaladda cakiran ee ka taagan dalka Itoobiya, hayeeshee waxaa dib usoo baxay war kale oo burinaya hadalkii wasiirka, kaasoo lagu beeninayo warka lagu qoray barta Twitter ka ee Wasaaradda Arrimaha dibadda Soomaaliya.
Dhacdadaas muranka dhalisay ayaa sabab u ah xil ka qaadista deg degga ah ee lagu sameeyay wasiirkii koowaad ee Wasaaradda arrimaha dibadda, sida ay Keydmedia Online ogaatay.
Sidoo kale, Cawad ayaa culeys ku noqday Dowladda Farmaajo kadib Musuq-Maasuq badan oo xafiiskiisa laga helay.
Cawad oo ka faa'iideysanaya marxaladda kala guurka ah ee dalka ayaa xilal ka safay rag ay isku jufo iyo asxaab yihiin billowgii bishii August.
Ragga uu Wasiirka magacaabay oo la sheegay in ay xigto yihiin ayaa waxaa ka mid ah Suhayr Cabdicasiis Maxamed uu Wasiirka Adeer laxmi ah u yahay, iyadoona Suheyr loo magacaabay Xoghayaha koowaad ee Safaaradda Soomaaliya ee waddanka Canada.
Waxaa kale oo xusid mudan in warqadaha magacaabista ay dhamaantood yihiin kuwo taariikhda dib loo dhigay, balse lagu soo beegay kadib xil-ka-qaadistii RW hore, Xasan Kheyre, sida Keydmedia Online markii ugu horeysay shaacisay.